Today liker — Steemit
မှုများအထောက်အထားသိမ်းယူရန်အဘို့အဒါဟာရှားပါးသည်။ ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ထိုင်လျက်နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှေ့နေကနေလုပ်ဖို့အပေါငျးတို့သပေမယ့်ကြားဖူးသည်။ အဆိုပါစီးနင်းမှုသတင်းများအရမုန်တိုင်းထန် Daniels အဖြစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သူညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Stephanie Clifford, ရန်, Trump
တယ်" ဟု Trump, groused "နှင့်ငါအဆက်မပြတ်ပေါ်မယ့်ဒီစုန်းမအမဲလိုက်ခြင်းရှိသည်။ " သူ့ဗိုလ်ချုပ်တွေ stiffly အပေါ်ရှာဖွေနေ, Trump နိုင်ငံ၏အမြင့်မားဆုံးဥပဒေ
နေရောင်ကိုဧပြီလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်း setting ခံခဲ့ရသည်အဖြစ်သမ္မတ Donald Trump အဆိုပါ gravest ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်ဦးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အတွက်မဆိုတပ်မှူးဆွေးနွေးရန်ဖို့ဝန်ကြီးအဖွဲ့်လဲခန်းထဲမှာရှည်သစ်သားစားပွဲပတ်လည်ဒုသမ္မတ, အကြီးတန်းစစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များနှင့်သူ၏အသစ်သည့်ဒင်္အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မှာစုဝေး စေနိုင်သည်နိုင်ငံခြားခြိမ်းခြောက်မှုဆန့်ကျင်စစ်ရေးအင်အားကိုအသုံးပြုရန်ရှိမရှိ။ ဆီးရီးယားအစိုးရစွပ်စွဲအနည်းဆုံး 40 အပြစ်မဲ့အရပ်သားများသတ်ဖြတ်နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်နှင့် Trump သူ့ကိုယ်သူတစ်နှစ်နီးပါးအစောပိုင်းကရေးဆွဲခဲ့သောမဟာဗျူဟာမြောက်အနီရောင်လိုင်းဖြတ်ကူး, ဒမတ်စကတ်မြို့အနီးတစ်မြို့ပေါ်မှာဓာတုလက်နက်များအသုံးပြုခဲ့လေသည်။ သို့သော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကသူ့စိတ်ထဲပေါ်အခြားအရာတစ်ခုခုရှိခဲ့သညျ။ "ဒါကြောင့်ပဲသူတို့သည်ငါ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှေ့နေများတစျဦး၏ရုံးခန်းသို့ချိုးဖဲ့ကွောငျးကိုကွား" ဟုသူကသတင်းထောက်များကိုအခန်းထဲသို့ပို့ဆောငျခဲ့ကြပြီးနောက်, unprompted ကဆိုသည်။ "ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ဆီးရီးယားအကြောင်းပြောနေတာနေကြ
ဘက်တော်သားအရာရှိ-အားလုံးခန့်အပ်၏ဆန့်ကျင်နေတဲ့မေးရိုးချပေးပါ diatribe သို့ဖြန့်ချိ မိမိအ-နှင့်၎င်း၏စီးနင်းမှုများအတွက် FBI ကအစောပိုင်းကသူ၏ရှေ့နေရဲ့အိမ်, ရုံးနှင့်ဟိုတယ်အခန်း၏နေ့ရက်ကာလ၌။ Trump "အရှက်" နှင့်ရှာဖွေမှုများကိုခေါ်တော်မူ "ကျနော်တို့တိုင်းပြည်တခုတခုအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှု။ " TIME အဘို့အ Tim O 'Brien တို့ကပုံဥပမာ Trump မှားယွင်းတဲ့-သူတို့ယခုအချိန်တွင်၏ပြင်းအားတန်ဖိုးထားရှင်းလင်းစွာဖက်ဒရယ်ကအတည်ပြုရမ်းအောက်မှာကောက်ယူတရားသူကြီး-ပေမယ့်ခဲ့သည့်စီးနင်းမှု၏ဥပဒေရေးရာအချက်အလက်များတယ်။ အာဏာပိုင်များမဆိုရှေ့နေရဲ့ရုံးခန်းထဲကနေအလားအလာရာဇဝတ်
၏ကိုယ်ရေးနှင့်ရှေ့နေသက်တမ်းကြာ fixer မိုက်ကယ် Cohen ကိုဖြင့်စွပ်စွဲခံရသောငွေပေးချေမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။ သူမသည်အဆိုပါ FBI ကလည်းသတင်းများအရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Enquirer ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်မီဒီယာ Inc ကို, အကြားသဘောတူညီချက်စေ့စပ်အတွက် Cohen ကိုရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ရှာနေနှင့်တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကရင် McDougal ၏ 1998 Playboy
ကစားဖော်ခဲ့သည် 2006 ခုနှစ် Trump နဲ့ကြည်ကြည်ကိစ္စဖူးမှမလုပ်ပဲ သူသူမတစ်ချိန်တည်းန်းကျင် Trump ဇာတ်ခင်းနေတယ်မိတ်ဆွေများကိုပြောပြသည်။ ဒီ Unorthodox အများပြည်သူကိန်းဂဏန်း၏ဘဝအသက်တာအတွက်အရုပ်ဆိုးပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာ inconsequential Saga တရားဝင်နှင့်နိုင်ငံရေးချုံဖုတ်ဖြစ်လာသည်နှင့်တူဘယ်
အရာကိုတာရှည်ပုံရသည်သိရသည်။ ဘီလ်ကလင်တန်ဆန့်ကျင်ပုံကို Paula ဂျုံးစ် '' နှောင့်ယှက်မှုကိစ္စအဖြစ်တာကသူ့စွပ်စွဲပြစ်တင်မောင်းနှင့် Anthony Weiner ရဲ့လက်ပ်တော့များဖမ်းဆီးရမိဟီလာရီကလင်တန်, Trump ၏ကိုယ်ရေးသမိုင်း၎င်း၏အာကာသယာဉ်ပြန်ဖွင့်ဖို့ကို FBI ဦးဆောင်တဲ့ယခုသူ၏သမ္မတသက်တမ်းခြိမ်းခြောက်စေခြင်းငှါကူညီပေးခဲ့သည်။ ဘဝ၌ရှိသကဲ့သို့နိုင်ငံရေးမှာတော့အမြင့်ဆုံးပု basest ဇစ်မြစ်ကနေလာမကြာခဏကျရောက်ပါတယ်။ "ဒါဟာဝိုင်းထားခြင်းကိုအောက်မှာတစ်ဦးကသမ္မတဖြစ်ပါတယ်" ဟုဂျူလီယန် Zelizer, Princeton တက္ကသိုလ်မှာနိုင်ငံရေးသမိုင်းပညာရှင်ကပြောပါတယ်။ ဒါဟာ Cohen ကိုစီးနင်းမှုတိုက်ရိုက် Trump သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့်ရုရှားတို့အကြားဖြစ်နိုင်သော collusion ၏အထူးအကွံဉာဏျရောဘတ် Mueller ရဲ့ပိုကြီးတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိသေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ Cohen ကို၏ရှေ့နေ-ကြောင့် Trump ၏ကိုယ်ပိုင်အကွံဉာဏျယခုရှေ့နေ-ဆိုပါတယ် Mueller ဝင်ရောက်စီးနင်းကြီးကြပ်သောမက်ဟက်တန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏, ရန် Cohen ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ လိုအပ်နေသည်ဟုပြောပြမယ့် အားလုံးနီးပါးဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေကသဘောတူသို့သော်ကြကုန်အံ့တစ်ဦးတည်းသောသမ်မတ၏, ရှေ့နေများ၏ရုံးများ RAID မှတရားသူကြီးတစ်ဦးထံမှရမ်းရဖို့, FBI ကအဲဒီမှာရာဇဝတ်မှုများကိုဖော်ထုတ်စေခြင်းငှါထူးကဲသက်သေအထောက်အထားမလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ FBI ကရှာဖွေနေခဲ့သည်ဖြစ်နိုင်သောပြစ်မှုများ၏တန်းစီဇယားတွေထဲမှာဝါရှင်တန်ပို့စ်သည်နှင့်အညီ, ထိုငွေပမာဏသည်များအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး-ဘဏ္ဍာရေးချိုးဖောက်မှုများ, ဘဏ်လိမ်လည်မှုနှင့်ဝါယာကြိုးလိမ်လည်မှုရှိကြ၏။ Cohen ကိုနဲ့သူ့ရှေ့နေနှစ်ဦးစလုံးမဆိုအမှားငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ကမွကွေီးပျေါမှာအာဏာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဝှမ်းအရပ်ဌာနကိုယူပြီးတစ်ဆပ်ကပ်ဖွဲ့စည်းမပြုခဲ့ပါလျှင်အားလုံးအရာ၏ရိုးရှင်းစွာလျောက်ပတ်စွာဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဆိုပါအမေရိကန်သမ္မတကလူသန်းပေါင်းများစွာ၏ကံကြမ္မာဆုံးဖြတ်သည်, ဤဧပြီလသူအများအပြားအကျပ်အတည်းများရင်ဆိုင်နေရသည်။ Trump အများဆုံးအမေရိကန်များ၏နေ့စဉ်ဘဝအပေါ်အကြီးအကျယ်အကျိုးဆက်များရှိနိုင်တယ်လို့တရုတ်နှင့်အတူစီးပွားရေးလမ်းပေါ်မှာကုန်သွယ်မှုရန်ပွဲစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ်၏အမှု၌သူဝါရှင်တန်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သူမြောက်ကိုရီးယားနျူကလီးယား-လက်နက်ကိုင်အာဏာရှင်နဲ့မျက်နှာ-to-မျက်နှာအစည်းအဝေးကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည်။ အားလုံးသည်စဉ်အခါ, Mueller စုံစမ်းစစ်ဆေးရှေ့ဆက်လှုံ့ဆော်ပေး။ သစ်လောင်စာမကြာမီမီးကဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်: ဖြုတ်ချ FBI ကဒါရိုက်တာဂျိမ်းစ်မစ္စတာ Comey ရဲ့ထဲလ်-အားလုံးစာအုပ်ဧပြီ 17 မှထွက်လာပါတယ်။ Cohen ကိုရှည်လျား Trump ရဲ့ fixer ခဲ့ပေမယ့်ယခုသူပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါရဲ့ Cohen ကိုရှည်လျား Trump ရဲ့ fixer ခဲ့ပေမယ့်ယခုသူပြဿနာတစ်ခုဝီလျံ Farrington-Polaris ဖြစ်လာမယ့် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ထောက်ခံသူများဖြစ်သော $ 1.5 ထရီလီယံအခွန်ဖြတ်, ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်တစ်ခုစီးပွားရေးနှင့်တောင်ကိုရီးယားနှင့်အတူသစ်တစ်ခုကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုအဖြစ်အောင်မြင်မှုများအကြောင်းကိုဝါကြွား။ သို့သော် Trump အဲဒီအနီးကပ်ဆုံးပိုဆိုးတာကအောင်သူ့ penchant အားဖြင့် unnerved နေကြသည်။ သူ-Trump လုပ်ဖို့ Mueller-ရာအိမ်ဖြူတော်ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးစာရာ Sanders သူက "အကယ်စင်စစ်သူကပါဝါရှိပါတယ်ယုံကြည်သည်" ဟုပြောသည်ပစ်ခတ်မယ်ဆိုရင်မေးမြန်းရာတွင်အဘယ်ကြောင့်ငါပဲ Mueller ပစ်ခတ်ပါဘူး "replied? ကောင်းပြီ, ငါကသွားမယ့်အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးအရှက်ကွဲမယ့်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ "သူကသတင်းများအရ့လုပ်နေတာထဲကစကားပြောခံရဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်နောက်ပိုင်းက Jeff Sessions ပစ်ခတ်အကြောင်းကိုကောက်ချက်ချထားပါတယ်, မိမိ
#good-karma #life #time #knowledge